नेपालमा पनि अब घण्टाको हिसाबले तलब पाइने ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमा पनि अब घण्टाको हिसाबले तलब पाइने !
काठमाडौं, असार २१ । अब नेपालमा पनि घण्टाका हिसाबले पारिश्रमिक पाउने भएको छ । घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली लागू भएसँगै सो अनुसारको पारिश्रमिक पाइने भएको हो ।
श्रम प्रणाली लागू गर्नाका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ । नयूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्ट टाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । सरकारले पहिलोपटक कम्पनी, प्रतिष्ठान, चियाबगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Salaray, तलब